2 (NH4)3PO4 + 3Ba (OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2
barium hydroxide biyaha ammonia
(lng) (lng) (lng) (kh) (rnn)
(xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (trung)
2 3 6 6 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2(NH4)3PO4 + 3Ba (OH)2 H 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2
Waa maxay xaalada falcelinta (NH4) 3PO4 () kaga falcelisa Ba(OH)2 (barium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NH3 (ammonia) iyo Ba3(PO4)2 ()?
Dhacdada ka dib (NH4) 3PO4 () waxay la falgashaa Ba(OH)2 (barium hydroxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Ba3 (PO4) 2, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Ba (OH) 2 (barium hydroxide), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2(NH4)3PO4 + 3Ba (OH)2 H 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta (NH4) 3PO4 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee (NH4)3PO4 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (NH4)3PO4 () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Ba(OH)2 (barium hydroxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ba(OH)2 (barium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba(OH)2 (barium hydroxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (barium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee NH3 (barium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Ba3(PO4)2 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Ba3(PO4)2 (barium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba3(PO4)2 () badeecad ahaan?
3H2 + N2 ↔ 2NH3
hydrogen nitrogen ammonia
(xoog leh) (xoog leh) (jacayl, daacadnimo)
3 1 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3H2 + N2 → 2NH3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2 (hydrogen) ee N2 (nitrojiin)
Heerkulka: 500 ° C cadaadis: xaalad cadaadis Xalka: Fe, Pt
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NH3 (ammonia)?
Dhacdada ka dib H2 (hydrogen) waxay la falgashaa N2 (nitrojiin)
Xawaaraha falcelintan ayaa ah mid aad u gaabis ah heerkulka caadiga ah. Waa kulkulul. Qiyaasta mol ee badeecada ayaa ka yar tan tan walxaha la falgalay. Sidaa darteed, waa inay ku fuliyaan falcelintan heerkulka sare oo leh cadaadis sarreeya iyo xalka kalluumeysiga. Cadaadiska sare, isku dheelitirku wuxuu u dhaqaaqaa jihada abuurka NH3, laakiin heerkulka sare, dheelitirka wuxuu u socdaa ka soo horjeedka, markaa waxaa kaliya lagu fuliyaa heerkulka ku habboon.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3H2 + N2 → 2NH3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta N2 (nitrogen)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee N2 (nitrogen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee N2 (nitrogen) ka falcelisa?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee NH3 (nitrogen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
(NS2)2CO + NaOH → Na2CO3 + NH3
sodium hydroxide kaarboon Sodium kaarboon ammonia
(rnn) (digo yara) (rnn) (kh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta (NH2)2CO + NaOH → Na2CO3 + NH3
Waa maxay xaalada falcelinta (NH2) 2CO () kula falgasha NaOH (sodium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Na2CO3 (sodium carbonate) iyo NH3 (ammonia)?
Urea waxay la falcelisaa NaOH
Dhacdada ka dib (NH2) 2CO () waxay la falgashaa NaOH (sodium hydroxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada (NH2)2CO + NaOH → Na2CO3 + NH3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta (NH2)2CO ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (NH2)2CO ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (NH2)2CO () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Na2CO3 (sodium carbonate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2CO3 (sodium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2CO3 (sodium carbonate) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH3 (sodium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
NaOH + NH4MAYA3 → H2O + NaNO3 + NH3
sodium hydroxide amooniyam amooniyam biyaha soodiyam amooniyam ammonia
(digo yara) (rnn) (lng) (rnn) (kh)
(xoog leh) (xoog leh) (trung) (jacayl, daacadnimo)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NaOH + NH4MAYA3 → H2O + NaNO3 + NH3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NaOH (sodium hydroxide) ay kaga falceliso NH4NO3 (ammonium nitrate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NaNO3 (sodium nitrate) iyo NH3 (ammonia)?
NH4NO3 waxay la falgashay NaOH
Dhacdada ka dib NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa NH4NO3 (ammonium nitrate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada NaOH + NH4MAYA3 → H2O + NaNO3 + NH3
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee NaNO3 (ammonium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaNO3 (sodium nitrate) badeecad ahaan?